ရေချိုးရာမှာ ရေနွေးနဲ့ချိုးတာနဲ့ ရေအေးနဲ့ချိုးတာ ဘယ်ဟာက ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းစေပါသလဲ – Wun Yan
ရေချိုးရာမှာ ရေနွေးနဲ့ချိုးတာနဲ့ ရေအေးနဲ့ချိုးတာ ဘယ်ဟာက ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းစေပါသလဲ
ချိုးတဲ့လူရဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်စီ ကွာခြားမှုရှိပေမဲ့ သာမန်လူတစ်ဦးအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ရေနွေးနဲ့ချိုးတာဟာ အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတာ ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာ 37°C ရှိပါတယ်။ 37°C အပူချိန်ရှိတဲ့ ရေနွေးနဲ့ ချိုးခဲ့ရင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနဲ့ စိတ်ကိုရွှင်လန်းစေတာကလွဲလို့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
37°C ထက်ပိုပြီး ပူတဲ့ရေနွေးနဲ့ချိုးရင် ခုနက အာနိသင်နှစ်ခုအပြင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အရေပြားကို စတင်ပူစေပါတယ်။ အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ သွေးကြောလေးတွေကို ပူစေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီသွေးကြောလေးတွေ ကျယ်လာပါမယ်။ ဒါကြောင့် အရေပြားတစ်လျှောက် သွေးလည်ပတ်မှုတွေ ကောင်းလာပါမယ်။
ပြီးရင် ကြွက်သားတွေ ပူနွေးလာတဲ့အတွက် ကြွက်သားတွေကြားမှာ သွေးလည့်ပတ်မှု ကောင်းလာပါမယ်။ ဒီလိုသွေးလည့်ပတ်မှု ကောင်းလာတဲ့အတွက် သွေးဖိအား (Blood Pressure) အနည်းငယ် ကျသွားပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်း အနည်းငယ်မြန်လာပါမယ်။ သွေးကြောထဲ လှည့်လည်နေတဲ့ သွေးပမာဏ (Circulating blood volume) များလာပါမယ်။ ကျောက်ကပ်ကို သွေးသွားတာ နည်းသွားတဲ့အတွက် ဆီးသွားတာလည်း လျော့နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေနွေးနဲ့မချိုးခင်မှာ ရေအဝသောက်ပြီးမှ ချိုးသင့်ပါတယ်။
ဒီလို ရေအဝသောက်ပြီးမှချိုးရင် ကြွက်သားတွေထဲကို အောက်ဆီဂျင် ပိုမိုပေးပို့ နိုင်ပြီး ကြွက်သားထဲမှာရှိတဲ့ ဇီဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်း (Metabolic waste) တွေဖြစ်တဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ် (Lactic acid) တွေဟာ သွေးကနေတစ်ဆင့် ကျောက်ကပ်ကိုရောက်မယ်။ ပြီးရင် ဆီးကနေ အမြန်ဆုံးစွန့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ ညောင်းညာ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေဟာ ဒီလက်တစ်အက်ဆစ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြွက်သားတွေကို အညောင်းပြေစေပြီး နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကနေ သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ သွေးထဲကနေ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေကို စွန့်ထုတ်ဖို့အတွက် အသက်ရှူနှုန်းတွေလည်း မြန်လာတတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အင်တီဘော်ဒီ (Antibody) တွေကို ပိုထွက်စေပါတယ်။ အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားမှု (Detoxification) ကိုလည်း များစွာကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အာရုံကြောတွေကို နိုးကြားကောင်းမွန်စေပြီး စိတ်ပြေပျောက်မှု၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု (Relaxation) ကို ရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို ရေနွေးနဲ့ လူတိုင်းချိုးသင့်ပါသလား??
အများအတွက်မှန်ပေမဲ့ ရေနွေးနဲ့မချိုးသင့်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
3. သွေးကျဲရောဂါရှိသူတွေနဲ့ သွေးမခဲစေတဲ့ဆေးအချို့ သောက်နေရသူတွေ (Patients under anticoagulant therapy)
4. လောလောဆယ် ဒဏ်ရာရထားသူတွေ၊ သွေးထွက်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ (ဥပမာ-နှာခေါင်းသွေးယိုတာတို့၊ သွေးကြောတွေ ပေါက်ထွက်တတ်သူတွေ၊ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့ရောဂါ (Scurvy) ရှိသူတွေ)
5. အရေပြားမှာ အယားအဖုအပိမ့် (Allergic rash) တွေ ထွက်နေသူတွေ
6. လောလောဆယ် အရေပြားမှာ ရောဂါပိုးတွေရှိနေသူတွေ ဥပမာ-အရေပြား တီဘီလိုရောဂါမျိုး (ရောဂါပိုးတွေ ပြန့်ပွားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်)
7. အချို့ကင်ဆာရောဂါသည်တွေ (သွေးကင်ဆာ)
8. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ (သန္ဓေသားဆီကို သွေးအရောက်နည်းမှာစိုး၍)
9. မွေးကာစ ကလေးငယ်လေးတွေ
10. သွေးပေါင်ကျတတ်သူတွေနဲ့ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၃ မိနစ် ရေနွေးအိုးတွေ မီးလောင်ရတာ ဒီအမှားတွေ ကြောင့်ပါ
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ အဆုံးအမ ဩဝါဒ
မိမိနေအိမ်မှာ ကွာရန်တင်း အခန်း လုပ်နည်း
← ဒေါ်လာငွေစက္ကူကို ဖားဥတက် မှိုစွဲပြီး ဝါကျင့်ကျင့် ဖြစ်မသွားရအောင် သိမ်းဆည်းနည်း
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ဟောစာတမ်း →